Archive du 22-mars-2022
SEG saika maty, miaramila lavo Aiza ny vokatry ny fanadihadiana ?
Telo volana mahery izay ilay fianjaran’ny angidimby nitondra ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena (SEG) Jeneraly Gellé Serge sy ireo mpiara-dia taminy ny 20 desambra 2021,
Mifoka inona loatra ?
Ny tànana efa zatra mitsotra tsy afaka mivokona intsony, ary sarotra tokoa ny hanova olona iray amin’ny toetra amam-pihetsika mahazatra azy.
CAN 2023 Fahagagana raha ho tafakatra ny Barea
Efa amboarina dieny izao izany aloha ny saina ho an’ny Malagasy rehetra, indrindra, ireo mpankafy ny baolina kitra Malagasy, raha ny mikasika ny faidianna ny amboaran’i Afrika manaraka na CAN 2023 no resahana.
Miha rava ny fiarahamonina Malagasy “Isany tena manimba ny tambazotran-tserasera”
Tsapa fa miha rava izao ny fiarahamonina Malagasy, hoy ny avy eo anivon’ny filankevitry ny fampihavanana Malagasy na CFM.
Dosie maloto, fifampialonana Hopotehina tanteraka i Imbiki Herilaza ?
Namoahan'ny fanjakana Malagasy IST (Interdit de sorti du Territoire) na fandrarana tsy hivoaka ny sisin-tanin'i Madagasikara ny minisitry ny fitsarana teo aloha Imbiki Herilaza miampy olona telo hafa dia ny depiote Mohamad Ahmad,
Oniversiten’i Mahajanga Mitaky vatsim-pianarana 6 volana ny mpianatra
Raikitra ihany koa ny grevin’ny mpianatra tany amin’ny Oniversiten’i Mahajanga omaly, taorian’ny tao amin’ny Politeknika Vontovorona sy ny teny Ankatso.
Fitateram-bahoaka - Itaosy Mangataka ny hampidirana koperativa hafa ny mponina
Mihenjan-droa ny tady eo amin’ireo mponin’Itaosy mampiasa ny taxibe 133 miazo an’Analakely sy ireto farany. Mahatsiaro ho mijaly loatra mantsy izy ireo amin’ny hafitsok’ireo mpamily sy ny mpanampy azy ao amin’ity koperativa iray ity.
Ambatondrazaka Tovovavy mpianatra 5 no voaolana tao anatin’ny iray volana
Mirongatra ny fanolanana ao amin’ny Fokontany Antsahalava, kaominina ambonivohitr’Ambatondrazaka. Tovovavy kely miisa 5 no indray lasibatra tao anatin’ny iray volana.
Famonoana an’i Danil Radjan Afaka ireo 4 voarohirohy, nosamborina inday avy eo
Herintaona sy tapany taorian’ny tranga nahafatesan’ilay teratany Danil Radjan ny 19 septambra 2020 teny amin’ny “La City” Ivandry,
Lainga, kolikoly, fahantrana,… Izao no voka-dratsin’ny « doublons »
Telo taona sy tapany aty aorian’ny fifidianana nampalaza ny “doublons” na anarana miverin-droa isika izao, saingy tsy nipetraka mandrak’androany ny fahamarinan-toeran’ny Fanjakana Rajoelina.
Kohen Rivolala « Governemanta mipasoka daomy io »
Governemanta mipasoka daomy io najoron’ny Fitondram-panjakana ankehitriny io raha araka ny fanazavan’i Kohen Rivolala, filohan’ny antoko politika Ctic Ctac Dou no sady filohan’ny fiangonana Jodaisma Hebraika etsy Ambanilalana Itaosy.
Ny oniversite ajoro Ny mpampianatra tsy mitombo ny isany
Tsy ho ela intsony dia ho vita tanteraka ny oniversite manara-penitra any Analanjirofo satria ny 90% ny asa no voalaza fa efa vita,
Tsy ho ela intsony dia ho vita tanteraka ny oniversite manara-penitra any Analanjirofo satria ny 90% ny asa no voalaza fa efa vita, araka ny tatitra nandritra ny fitsidihan’ny Filoha Rajoelina ny faran’ny herinandro teo.
Barthés trophy U20 Ao ambadiky ny Makis ny Malagasy sy ny mpankafy Rugby
Ho tontosaina atsy Nairobi, Kenya, ny 9 hatramin’ny 17 aprily izao ny fifaninanana iraisam-pirenena eo amin’ny taranja Rugby ho an’ny latsaky ny 20 taona na ny Barthés trophy U20.
Torolalana fanorenana ny firenena Namoaka boky kely ny CFM Antananarivo
Isan’ny ezaka ataon’ny filankevitry ny fampihavanana Malagasy na CFM ny fanorenana ny firenena. Ohatra iray, hoy ny filoha lefitra misahana an’Antananarivo,
Gérard Ramamimampionona - CFM “Tokony hifampiresaka dieny mbola tsy misy gidragidra”
Lalim-paka be amin’izao fotoana izao ny valanaretina tafiditra anaty fihavanana sy fiarahamonina Malagasy, hoy ny filoha lefitry ny filankevitry ny fampihavanana Malagasy, Gérard Ramamimampionona.
Jean Nirina Rafanomezantsoa “Ravana ao any ny HCJ, tribonaly tsotra dia ampy”
Ny zava-dehibe indrindra amin’izao zava-misy izao, hoy ny filohan’ny fikambanana Hafari Malagasy, Jean Nirina Rafanomezantsoa, dia ny fanalalahana ny fanondranana harena an-kibon’ny tany.
Lalana Ambato Boeny - Andranofasika Mampitaraina ireo mpampiaka-bokatra
Velon-taraina manoloana ny haratsian-dalana mampitohy an’Ambato boeny sy Andranofasika, eo amin’ny lalam-pirenena faha 4,
Lozam-pifamoivoizana teto an-drenivohitra 121 tato anatin’ny efa-bolana, 22 no maty
Miisa 121 tato anatin’ny efa-bolana ny lozam-pofamoivoizana nitranga teto an-drenivohitra tato anatin’ny efa-bolana. Nanomboka ny volana Desambra lasa teo izany ka hatramin’ity volana martsa izay mbola tsy mifarana ity.
Ambato boeny Niova endrika ny tsy fandriampahalemana
Niova endrika ny tsy fandriampahalemana ao Ambato boeny satria tsy misy intsony ny omby marobe alain’ny dahalo na famonoana olona mahatsiravina matetika sy fandorana tanana, hoy ny ben’ny tanana ao an-toerana, Jean Valerien Rakotonandrasana.
Andro iraisam-pirenena momba ny ala Ny orinasa Fanalamanga no nanamarihana azy
Nankalazaina tamin’ny fomba ofisialy tao amin’ny orinaasa Fanalamanga ny fanamarihana ny andro iraisam-pirenena momba ny ala omaly 21 martsa.
Soavinandriana Itasy Efa tongan’ny jiolahy mitondra antsy ihany koa
Nitrangana toe-javatra mampalahelo tao amin’ny tsenan’i Soavinandriana afak’omaly tokony ho tamin’ny 05 ora sy sasany hariva.
Madagasikara Tsy mahay mamaky teny sy manoratra ny 20% n’ny olon-dehibe
Mbola mahatratra 20% ny tahan’ireo olon-dehibe tsy mahay mamaky teny sy manoratra manerana ny Nosy raha araka ny fanadihadiana natao teo anivon’ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena.